MUUQAAL+Murugo: Donald Trump oo Soomalida Masaafurinaya iyo Dumar ay Ilmadu ka dhamaatay iyo Waxa dhacay | Kalshaale
MUUQAAL+Murugo: Donald Trump oo Soomalida Masaafurinaya iyo Dumar ay Ilmadu ka dhamaatay iyo Waxa dhacay
Dec 12, 2017 - 14 Aragtiyood
Minnesota (Kalshaale) Qaar ka mid ah qaraabada iyo qoysaska 92 qof oo Soomaali ah oo laga masaafuriyay dalkan Mareykanka, islamarkaana diyaaraddii sidday iyadoo aan gaarin Soomaaliya ay dib ugu laabtay Mareykanka, ayaa waxa ay banaanbax ka dhigeen magaalada Minneapolis ee Gobalka Minnesota.
Dumar Soomaaliyeed oo sheegay inay Caruurtooda ku Jirto dadkaasi ayaa si Murugo badan uga hadlay, Waxayna ka Warbiyeen sida wax u dhaceen.
Dalkiina, Aamina, Daayinku, Isaguuu, Idiin Doorreee,)
Dooraale, Diinba ka Duloobey, ilmada Inaad U Daadisaan, Waa idiin Damiir Xummoeeeeeeeeeee,)
Daacada, Alleee, ku Dadaala, Daayinkiin, Wuu Idiin
Weysada, Daaimaaa, Daliilka, Aayadaha, dhegihiina,
Ku Sii Daaya, Qalbigu Hadiin Duxeeeeeeeeeeeeeee,)
Dirirta, Dooxida, Is Diidka, ka Dawooba, Daayinkiina,
Janaaa Laga Dalbadaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,)
Intaad, Isdooxayseen, Ayaaa Dunidu, Dayaxa Degteee,)
Sidaan wada ognahey
qalbiga waxaa nooga jiro inaan maalin maalmaha ka mid ah DALKII HOOYO ku laabandoono.
Qalbiga waxaa ka jecelnahey in nalagu duugo/aaso CIIDII HOOYO markaan dhimano
Sidaan wada ognahey maalinkasto waxaa diyaarado saarnaa meydadka ehelkeena ku dhintey Qurbaha si aan lafahooda loogu gubin Europe.
** Haddaba maxaa nala gudboon**
– Inaan dalkii ku noqono markaan duqowno anagoo kaligeen ah? No caruur,no xoog ( qaraabo masaajidka ii tilmaama)
Waa odagii iyo duqdii Qurbaha ku soo wareeray, oo xataa caruurtoodii ka soo tagey.
– mise inaan caruurta dalkii ku celino intey yar yaryihiin – hooyooyinkuna yeelaan iney caruurta ku hayaan Soomaaliya , odaguna soo shaqeeyo.
-ama xataa markey dhameeyaan Dugsi sare ama jaamaca.
Intaan lagu celin (Meyd,duqnimo,tarxiil noqotayaa) adigu isceli oo dalkii ku laabo.
**Intaan laguu talin Tasho**
Dhulka SOOMAALIYEED, soo taad ku xaartay oo ku furatay dhamaan ummada SOOMAALIYEED.
Dhulkii wanaagsanaa ee SOOMAALIYA adaa SOOMAALI WEYN kaaga tagtay. Waliba ma aadan jooginee, waad ka daba timid dadkii kaa cararay. Markaas baad ula timid sumcad xumo, dil iyo kafsigii aad ku sameen jirtay.
War sida isu dhaamaa. ILAAHEEY ha idin soo hadeeyo. Goormee dad noqonayaa kala yaqaan wixii fiican, una hiiliyaan waxa wanaagsan, kana dagaalamaan wixii xun.
QURUB wada xaaraan ah, markaas buu ku leeyahay:
++ waddankii soomaaliyeed
++ ciidii soomaaliyeed
Mid Reer Uganda ah ayaa maalin ila kaftamay,laakiin kaftankaasi macno ayuu iigu fadhiyay.
Wuxu yidhi,Waar marka aad ka tagtaan Somaliya,waad shaqaysataan oo caruurtiina isguulo ayay dhigtaan,nabadbaad heshaan oo nolol ayaad ku nooshishiine,maabad Somaliya iskaga guurtaan.Iskaga guura idinka ayay idin fiican tahay.
Waxaan ku idhi,waayo.
Wuxu yidhi.dee dhulkiina markaad joogtaan dagaal uunbaad ku jiraan.Maxaabad ku falaysaan dhulkii haduuba dhib idinku hayokkkkkkkkkkkkkkk
Dhulka dad kale aan siino oo marka ay ka shaqaystaan ee ay dhistaan aan u soo shaqo tagno ama hayna qaabilaan oo wax aan cuno iyo jiif hayna siiyaan
Halkan anaale iyo meeshaa annagale ayaa noloshii lagu dhamaystay.
Wallaahi Somalida wax waynbaa si ka ah.
Mr bahal salaan sare Mudane qamuus
Walle ninkaas reer ugandha difiicanbuu u yaqaan somalida
tolow markuu hadalkaas kuyiri maka gareysatay?
Waa xaqiiq somalidu markeey jogaan wadan shisheeye waa fulayiin sharciga wey kabaqaan oo wey xishmeyaan
Markeey dalkooda jogaan wey kuxaraan oo iyagu waxba isuma ogolo
Iga ilaali Mr bahal xabashido waxba iima dhimeyso
Iga ilaali dabshid Kenya waxba iima dhimeyso
Waa caqliga somalida
Sxb adna waan ku salaamay.
Ninka maalmo badan Ayaan ku kulanay meel shaqo.Wuxuu ahaa nin xataa markaasi fasax kaga sooo noqday Uganda iyo Kenya.Shekadu way dheerayd,misana wada run ayay hayd.
Wuxu ku leeyahay,dhibkaba malaha dhulka ayaa idiinku wacan.Dee iskaga taga oo dad kale ha degaane.
Faaiido idiin maaha inaad meeshaasi joogtaan.Dee,kuma noolaan karaysaan oo Isguul iska dhaafe biyo Kuma haystaan,Dan idiin mahaa meeshaasi.
Aqli sax ah ayuu ku hadlayay oo wuxuu arkay wadamo badan oo ay Somalidu si caadi ah uGu nooshahay.
adoo.miidhan ayaa loo nacayaa hawiye ? horta aniga shaqsiyan adaan kuu nacayaa reerki hawiye ee sharafta lahaa wax.aad u tarto iyada.daa waar sharafti reerku golaha ku lahaa maanta malahan xayawaan sida loohadlo yaqaanbatay adeerow dib isugunoqo sidii aad koloha ugadoodi jirteen ugadooda hadikalena ilxumada nagadaaya
soo soco waryaa
kan garqaad ee aad moodo in uu masaajid ka eedaamo bal eeg asagana kkkkk . maati canale waligiin gadhimaysaan daarood ee adeer haxiiqina . igawale . land of bunt ayaa idinku filan rag ayaad isuhaysataan adeer sixir kalle ayaad garacateen qiimo qaldan ayaad garacateeen wbt
Hadalkii ugu macqulasana manta ayaad shegtay .
Dhulka somalidu maha dhul xun balse dadkisa ayaa xun o xaasid ah.
Maanta hadaad dhaqaalo badan sameysid adigoo cid kale kusoo gaadhin walalka ama kii qaraabo kugu xigay ayadan amanka helayn aalhirka ama walagu dilaya ama waad cararaysa .
Somalida dhaqan aanla fahmeyn o guran ayey leeyihiin.
Somalida dhamaan waa dad dagaalka kufana dhigana qubanayana yaab waxba la aheyn.
Illahay sidaan haw dhaamo inshallah.
Ninkaas Ugandeska ah waa nin darsay aqliga Daanyeernimo ee Soomaali maryooley.
Wuxuusan kaloo ogeyn in Soomaalidu isugu jirto Shaqeyste iyo Shaxaade.
Haddii lagu dhahey Tuuladaadii ku labo naas nuujin iyo Guno been ah laguma jirikaro.
Lama Diidana in Waayeelka sida Faroole la qarameeyo, maleeshiyo beeleedka la qarameeyo.
Agoonta Mahbarkii hore dib u dejin loogu sameeyo meelay ku dhuuman karaan maadaama raro ka jirin Tuulo Tuulo dab u shido.
** 26 sano maxaad ku soo kordhiseen Soomaaliya oon ka aheyn HORTA MAXAAD U RIDEEN DOWLADDII SHUUCIGA.
War Alle joogo oo ma dhintaaye ee Barta Sida loo shaqeysto hadduu Aabo Siyaad Tagey.*
= Bari ka jirin Tuulo Tuulo Dabka u shido.
DUNIDA ISLAAMKA EE OLOLAYSA YAA OLOLIYEY? MARAYKAN BAA OLOLIYEY. MARAYKANA WUXUU KU SIFOOBAY CADOWGA KOOWAAD EE DUNIDA ISLAAMKA. XAQIIQDU..
WAA IN UU QABSADAY. In UU DUQEEYO IYO IN UUKU SOCDP HADEER
Aduu waxaad ka hadashaa dhacdada.
Laakiin wuxu marka uu dhacayo wuxuu soo qaatay wakhti dheeer.Wuu isasoo tararay maalinba maalinta ka dambaysa,kadibna wuxuu gaadhay in la qaban kari waayo.